निजी कलेजको माफियागिरी कहिलेसम्म? २२ लाखको एमडी भर्ना शुल्कमा ३१ लाखभन्दा बढी माग | Suvadin !
निजी कलेजको माफियागिरी कहिलेसम्म? २२ लाखको एमडी भर्ना शुल्कमा ३१ लाखभन्दा बढी माग
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निजी कलेजहरुले मनोमानी गरेर भर्ना रकम असुलीरहेका छन्। चितवनको चितवन मेडिकल कलेज, पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज, भैरहवाको भैरहवा मेडिकल कलेज र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजहरुले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान ‌आइओएमले तोकेभन्दा बढी शुल्क मागेको भर्ना गर्न पुगेका विद्यार्थीहरुले बताएका छन्।
May 13, 2018 16:46
काठमाडौं, ३० वैशाख – प्रा.डा गोविन्द केसीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जतिनै सुधार गर्न अन्सन बसेपनि निजी कलेजको माफियागरीले अन्त्य हुन् सकेको छैन। निजी कलेजको दादागिरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका एमडी तहको कलेजको भर्नामा छर्लङ्ग देखिएको छ।
एमडी तहको भर्ना शुल्क आइओएमले २२ लाख तोकेको छ। शुरुमा ११ लाख र बाँकी किस्तामा शुल्क बुझाउने आइओएमले काउन्सिलिङ गरेको छ। गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा एमडी भर्ना हुन पुगेका एक विद्यार्थी कलेजले ३१ लाख भन्दा बढी मागेकाले भर्ना नगरेको बताए।
उनले भने, 'त्रिवीका निजी कलेज सबैले भर्नामा सिन्डिकेट गरेका रहेछन्। हामीले आइओएममा खबर गरेका छौँ। अब के गर्ने सबैसँग छलफल गरेपछि थाहा हुन्छ। हामी आइओएमले तोकेको भन्दा ११ लाख बढी तिर्न सक्दैनौ।'
एमडी तहमा भर्ना गर्न ओपन हाउस काउन्सिलबाट छनोट भएर चितवन मेडिकल कलेज भर्ना गर्न पुगेका अर्को एक विद्यार्थीले पनि कलेजले ३१ लाखभन्दा बढी मागेको बताए। उनले भने, 'न केही कागज छ न कुनै शीर्षक त्यतिकै बढी शुल्क मागे। उनीहरु आइओएमले तोकिएको शुल्कमा भर्ना नगर्ने बताउँछन।'
उनका अनुसार एमडी तहमा भर्ना गर्न पुगेका १९ जना विद्यार्थीहरु बढी शुल्क मागेकाले भर्ना नगरी बसेका छन्। ती विद्यार्थीले भने, 'हामीले अन्य निजी कलेजमा पनि बुझ्यौ। त्यता पनि बढी पैसा मागेर साथीहरु तनावमा हुनुहुदोँरहेछ।'
अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले विशेषज्ञ तह अध्ययनका लागि ३१ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो। संस्थानको चैत्र १२ गते बसेको बैठकले उक्त शुल्कबाट ८ लाख रुपैयाँ घटाएर २२ लाख लिने निर्णय गरेको थियो। त्रिवि अन्तर्गतका ७ मेडिकल कलेजमा चिकित्साशास्त्रतर्फ विशेषज्ञ तहको पढाइ हुँदै आएको छ।
बढी भर्ना शुल्क माग गरेपछि विद्यार्थीहरुले आइओएम, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निवदेन दिएका छन्। आइओएमका डिन जगदीशप्रसाद अग्रवालका अनुसार निजी कलेजहरुले २२ लाखमा पढाउन नसक्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका छन्। मुद्दाको सुनुवाई भोलि हुँदैछ।
अग्रवालले भने, 'हामीले त २२ लाखमै पढाउने भनेर अघिल्लो वर्षा ३१ लाखमा पढाइ भइरहेका कोर्सको भर्ना शुल्क घटाउने निर्णय गरेका थियौ। उनीहरु अदालत गएका छन्। यस विषयमा फैसला भएपछि आधिकारीक धारणा राख्नेछौं।'